Bixby, mpanampy virtoaly an'i Samsung dia efa miteny espaniola | Androidsis
Bixby dia efa miteny espaniola, na dia tsy misy aza izany any Espana
Bixby no mpanampy virtoaly an'ny Samsung. Hatramin'ny namoahana azy dia tsy nandeha mora ilay mpamosavy. Haingana i Samsung nanangana azy satria mbola tsy vita. Maro ny fiasa tsy nahavita niasa. Inona koa, ny tsy fahampian'ny fiteny (amin'ny teny Anglisy sy Koreana ihany) dia nilanja mavesatra.
Saingy, manohy mampiasa vola amin'ny mpanampy ilay orinasa iraisam-pirenena Koreana. Soa ihany fa toa misy vaovao tsara. Ny orinasa dia niasa tamin'ny fampidirana fiteny vaovao, misy valiny tsara. Bixby dia efa miteny espaniola.
Ya azo atao ny mampiasa ny mpanampy virtoaly Samsung amin'ny Espaniôla. Na eo aza izany dia mbola misy fetrany ihany, satria ny fifandraisana amin'ny feo dia mbola tsy vita. Amin'izay mba mbola tsy vita ihany. Saingy, io dia fandrosoana lehibe tokoa ho an'ny mpanampy. Satria ny fiteny dia lafiny iray izay tsy nahomby be loatra.
Na dia tsara aza ny vaovao dia misy lafiny roa ihany koa izay manasongadina. Amin'izao fotoana izao Bixby ihany no miteny Espaniôla US. Midika izany fa io fiasa sy fiteny vaovao io dia misy any amin'ny firenena amerikana ankehitriny ary koa any Korea atsimo. Saingy, tsy any Espana. Tsy fantatra ny fotoana hahatongavany any amin'ny firenen-kafa toa an'i Espana na Amerika Latina.
Ankoatra izany, Samsung mihitsy tsy mbola naneho hevitra momba izany. Tsy mbola nolazain'izy ireo akory fa efa nisy tamin'ny Espaniola ilay mpanampy. Nisy mpampiasa sasany izay nampakatra sary tamin'ny tambajotra sosialy. Misaotra an'io fa hita fa efa hainy ny Espaniola.
Noho izany, hitantsika fa ny fahatongavan'i Bixy miteny sy mahatakatra ny Espaniôla dia efa nandroso tsara. Noho izany ny orinasa dia mety mametraka ny famitana farany ary ho avy tsy ho ela any Espana. Heverinay fa tsy hitranga izany raha tsy amin'ny taona ho avy.. Na izany aza, Samsung dia tokony hihazakazaka, satria izy ireo dia lavo lavitra any amin'ny tontolon'ny mpanampy virtoaly. Ahoana ny hevitrao fa efa miteny espaniola i Bixby?
espaniola bixby @SamsungMobile @samsung_es pic.twitter.com/7drJQ4mVSl
- Evercola (@evercola) Desambra 6, 2017
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Bixby dia efa miteny espaniola, na dia tsy misy aza izany any Espana